မန်ယူတွင် ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ဘယ်ကျောနံပါတ်ကို ဝတ်ဆင်လာမလဲ? – Play Maker Sports Journal
မန်ယူတွင် ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ဘယ်ကျောနံပါတ်ကို ဝတ်ဆင်လာမလဲ?
တကယ်လို့များခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုသူ့ရဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ကျောနံပါတ်၇ဖြင့်မမြင်တွေ့ရပါကအံ့ဩစရာအနေအထားဖြင့်ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်တွင်ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာ CR7 အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်အဝတ်အစားများထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုအနေဖြင့်မန်ယူတွင်ရွေးချယ်ဖို့လစ်လပ်နေတဲ့ကျောနံပါတ်များကတော့ ၁၂၊၁၅၊၂၄၊၃၀၊၃၁၊၃၃၊၃၅ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
မန္ယူတြင္ ခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒို ဘယ္ေက်ာနံပါတ္ကို ဝတ္ဆင္လာမလဲ?
တကယ္လို႔မ်ားခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒိုကိုသူ႔ရဲ႕အမွတ္အသားတစ္ခုလိုျဖစ္ေနတဲ့ေက်ာနံပါတ္၇ျဖင့္မျမင္ေတြ႕ရပါကအံ့ဩစရာအေနအထားျဖင့္ရွိေနပါတယ္။တစ္ဖက္တြင္ခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒိုဟာ CR7 အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္အဝတ္အစားမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
ခရစၥတီယာႏိုေရာ္နယ္ဒိုအေနျဖင့္မန္ယူတြင္ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔လစ္လပ္ေနတဲ့ေက်ာနံပါတ္မ်ားကေတာ့ ၁၂၊၁၅၊၂၄၊၃၀၊၃၁၊၃၃၊၃၅ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့မန်ယူအင်္ကျီကို အလျှင်စလို မီးရှို့ခဲ့လို့ အရှက်တကွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ သရဲနီပရိသတ်
လူငယ်ပါရမီရှင်ဆားလ်ကို ခေါ်ယူပြီး မက်ဇ်တွင်ပင် အငှားချလိုက်တဲ့ စပါးစ်